के किरा लागेको दाँत फाल्नुपर्छ? उपचार के? (भिडियो) :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
के किरा लागेको दाँत फाल्नुपर्छ? उपचार के? (भिडियो)
कमला गुरुङ शनिबार, फागुन १४, २०७८, ०६:११:००
काठमाडौं - खाना खाइसकेपछि राम्रोसँग सफा नगर्दा दाँतमा किरा लाग्ने समस्या हुन्छ। चिकित्सकीय भाषामा यो समस्यालाई दन्त सडन पनि भनिन्छ।
– दाँतमा किरा लाग्ने समस्या भनेको खानेकुरा तथा काठमा लाग्ने किरा जस्तो होइन।
– दाँतमा लाग्ने किरा एक प्रकारको सुक्ष्म जीव हो। जुन नाङ्गो आँखाले देख्न सकिँदैन।
– मुखमा भएका सुक्ष्म जीवले दाँत र गिजाको बीचमा अड्किएका खानेकुराहरुलाई एसिडमा परिणत गरिदिन्छ।
– ती एसिडले सुरुमो दाँतको बाहिरी भाग इनामेललाई खियाउँछ। त्यसपछि दाँतमा खाल्डो पर्दै जान्छ।
– पहिले इनामेल त्यसपछि डेन्टिङ, पल्प हुँदै जरासम्म पुग्छ।
– सुरुवाती चरणमा दाँत किराले खाँदा दुखाई त्यति नहुन सक्छ।
– यदी दाँतको रंग सामान्य भन्दा फरक खैरो, फुस्रो या कालो रंगको देखिनु नै यसको सुरुवाती लक्षण हो।
– सुरुवाती चरणमै दाँत किराले खाएको ठाउँमा उपचार गरे भविष्यमा समस्या हुँदैन।
– हामीले सरसफाई गरेनौ भने यो समस्या दाँतको डेन्टिङमा पुग्छ।
– डेन्टिङमा पुगेपछि दाँतमा खाना अड्किने, ब्रस गर्दा तथा गुलियो खानेकुरा खाँदा सिरिङ–सिरिङ गर्ने समस्या हुन्छ।
– समयमै उपचार नगर्दा दन्त सडन दाँतको भित्रि भागमा पुग्छ। जहाँ दाँतको जरा, नशा, शिरा हुने गर्छ।
– दन्त सडनको समस्या भित्रि भागमा पुगेपछि मात्र दाँत दुख्न थाल्छ। र, गिजामा संक्रमण हुन सक्छ।
– दाँतको जरामा संक्रमण भए गिजा सुन्निने, दाँत हल्लिने र दाँत नै गुमाउनुपर्ने अवस्था आउँछ।
– दाँतमा किरा लाग्ने बित्तिकै फालिहाल्नुपर्दैन।
– सरुवाती चरणमै उपचार गरियो भने दाँत फाल्नुपर्ने अवस्थासम्म पुग्नु पर्दैन।
– मुखमा राखेर कुनै पनि फाइदा नहुने दाँतलाई मात्र निकाल्नुपर्छ।
– विभिन्न उपचार विधिबाट किराले खाएका दाँतको उपचार गरेर बचाउन सकिन्छ।
– कपासमा ल्वाङको तेल, सञ्चो कपासमा राखेर दाँतमा च्याप्ने पनि गर्ने गरिन्छ। यी कुराहरु दुखाई कम गर्ने रसायन हुन्।
– यी कुराहरु गिजा, गाला वा जिब्रोमा नछोइकन दाँतमा राख्यो भने दुखाई कम गर्छ। तर यसले दन्त सडनको समस्यालाई रोक्दैन।
– समस्याको मुख्य कारण पत्ता लगाएर नै उपचार गर्नु ठिक हो।
– गिजाबाट रगत आउने समस्या ९० प्रतिशतभन्दा बढी दाँत फोहोर भएका कारण हुन्छ।
– दाँत फोहोर हुँदा गिजा संक्रमण हुने संभावना हुन्छ।
– गिजा सुन्निएको ठाउँमा ब्रस गर्दा रगत बग्ने समस्या हुन्छ।
– ६/६ महिनाको अन्तरालमा दन्त चिकित्सकलाई दाँत परीक्षण गर्नुपर्छ।
– नियमित रुपमा दाँतको परीक्षण गराउँदा समस्या सुरुवाती अवस्थामा पत्ता लगाउन सकिन्छ।
– एक÷एक वर्षमा भने दाँत सफा गर्न सकिन्छ।
– दाँत किरा लाग्नुका विभिन्न कारक तत्वहरुमध्ये खानेकुराहरु पनि एक हुन्।
– टाँसिने, गुलियो खानेकुराहरुले गर्दा दाँतमा किरा लाग्छ।
– खानेकुरा खाने बित्तिकै पानीले कुल्ला गर्न आवश्यक छ।
– दाँतलाई सफा राख्नु नै यसलाई बचाउन सकिने मुख्य उपाय हुन्।
– खाना खाईसकेपछि बिहान बेलुकी गरेर दिनको दुई पटक ब्रस गर्नुपर्छ।
– दाँत सही तरिकाले माझ्नुपर्छ।
– फ्लोराइड भएको मन्जनले दाँत सफा गर्नुपर्छ।
– डेन्टल फ्लस एक किसिमको धाँगो हो। यसको सहायताले पनि दाँत सफा गर्न सकिन्छ।